Lego Marvel 76200 Bro Thor's New Asgard သည်လျင်မြန်စွာရောင်းကုန်သွားပါပြီ
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 444 Views စာ0မှတ်ချက် 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, သြဂုတ်လ, စာချုပ်, အပေးအယူ, Korg, Lego, lego အပေးအယူ, Lego Marvel, Lego ကမ်းလှမ်းချက်, LEGO ကမ်းလှမ်းမှု, စတော့ရှယ်ယာထဲက Lego, Lego စတော့ရှယ်ယာ, Marvel, Miek, အသေးစား, Sets အသစ်များ, ပေးကမ်း, ကမ်းလှမ်းချက်များ, Polybag, Shang-Chi, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, ရောင်းကုန်ပြီ, စတော့ရှယ်ယာ, Thor
စတော့ရှယ်ယာပြဿနာများသည်တရားဝင်အွန်လိုင်း၌ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည် Lego စတိုး နောက်ဆုံးပေါ်ထပ်တိုးအဖြစ် Marvel Infinity Saga အပိုင်းနှင့်ပထမဆုံး Korg minifigure တို့ကိုယာယီမရနိုင်ပါ။
Lego Marvel ၇၆၂၀၀ Bro Thor ၏ Asgard အသစ်သည် ၇၅၃၁၂ Boba Fett ၏ Starship တွင်အလျင်အမြန်ရောင်းကုန်အစုံများစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ LEGO.com သြဂုတ်လအပေးအယူများနှင့်ပစ်လွှတ်မှုများစတင်သည်နှင့်အမျှ
76200 Bro Thor's New Asgard သည် Avengers: Endgame နှင့် Miek တွင်လက်နက်မပါဘဲ Avengers: Endgame နှင့် Miek တွင်ပေါ်လာသည့်အတိုင်းအဆင်ပြေသော Thor ဗားရှင်းကိုပထမဆုံးပြသသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ ထို minifigures သုံးခုသည်မိုးကြိုးနတ်ဘုရား၏ New Asgard အိမ်တွင်လူနေထိုင်မှုပုံစံကိုသရုပ်ဖော်ထားသောအသေးစိတ်များနှင့်များစွာပါ ၀ င်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတားမြစ်ချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်.
တစ်မူထူးခြားသောပုံစံဖြင့်အပိုင်းသစ်နှင့်အတူ Marvel စူပါဟီးရိုးလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုအာရုံစိုက်ပြီးတည်ဆောက်မှုကိုပိုအာရုံစိုက်တာကမော်ဒယ်သစ်ကိုလူကြိုက်များကြောင်းသက်သေပြတာကိုအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ဘူး။ LEGO.com.
လစဉ်အပေးအယူများအနက်တစ်ခုမှာ Shang-Chi အခမဲ့ဖြစ်သည် ပိုးအိစံ Th 40 / $ 40 / € 40 အထက်အမှာစာများဖြင့် ၇၆၂၀၀ Bro Thor's New Asgard သည်တံခါးနားသို့ရောက်သည်ထက်တစ်ဝက်ကျော်ရှိသည်။ အဲဒါကသြဂုတ် ၁၅ ရက်အထိကြာမယ်၊ ဒါကြောင့် ၇၆၂၀၀ Bro Thor ရဲ့ Asgard အသစ်ကစတော့ရှယ်ယာမလာခင်ငါတို့ပို့စ်တင်မယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏အထဲကစစျဆေးနိုငျ လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ လာမည့်သြဂုတ်လ၌တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာအားလုံးအတွက်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအပြင်အသစ်ထွက်ရှိထားသောစာရင်းတိုင်းကိုပါထပ်မံသိရှိနိုင်သည်။
← နောက်ဆုံးပေါ်အခမဲ့ LEGO Ideas ကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်
လူကြီးများအတွက် LEGO အသစ် Star Wars set ကကုန်သွားပြီ →